I-Cryomassage kunye ne-cryoprocedures - unyango olubandayo
Phakathi kwe-ice cream kunye ne-frog slush ngumbahluko omkhulu. Iyokuqala isenza sibe mnandi, okwesibini - yenza ukuba ungabi nasizathu. Siya kumisa apho iindawo eziqhenqileyo neqabileyo zilawula. Emva kwayo yonke into, ibanda libona udokotela owaziwayo, kunye ne-cryomassage kunye ne-cryoprocedures - unyango olubandayo - lufanelekile njengophilisi.
Ukusetyenziswa kwamaqondo atshisayo aphantsi - uxinzelelo. Iiselingi, ezothuswa kukuba ziphoqeleke ukuba ziphile kwiqanda, ziba nzima, i-microcirculation iyanda, imeko yesikhumba kunye nomzimba wonke uphucula. Ukupholisa ngokugqithiseleyo njengokuba intsikelelo yaqala ukubonga iJapane iToshimo Yamauchi, ocebisa ukuba basebenzise ukwenzela unyango lwomoya lukhuphe umoya ukuya kwi-100 - 180C. KwakuseMhlabeni weLanga eliphumayo iminyaka emashumi mane edlulileyo ukuba i-cryosauna yokuqala yabonakala.
Yaye ngelixa umoya uzama ukuguqula i-velvety and freshness yesikhumba sethu ibe yomileyo kunye nokukhathala, kusetyenziswa umzuzu, kukho imishalo emitsha kunye namabala e-pigment, sinokupholisa intshiseko yabo ... iqhwa neqhwa. Kwaye ngexesha elifanayo ukulungisa iimpazamo eziye zavela ngenxa yelanga, ixesha kunye nendlela engafanelekanga yobomi.
Kukho iinkonzo "zeqhwa" zeentlobo ezimbini ze-cryomassage kunye neenkqubo ze-cryotherapy - unyango olubandayo. Kwisihlandlo sokuqala, ukugqithisa ubuso kunye nentamo ye-massage yenziwa nge-applicator yekotoni, egalelwe i-nitrojeni yamanzi (ukushisa kwe-nitrogeni - ngaphantsi kwee-degrees ezingama-196). I-cosmetologist, ingathinti kancinci, ngokukhawuleza ikhupha umfaki sicelo ngokubhekiselele kwimigca yokusila. Ukutshisa kunye nokubetha okukwenzekayo ngexesha le nkqubo kuhlawulwa ngokupheleleyo ngumphumo omangalisayo. I-manual cryomassage, nangona ijongwa nje ingaphelelwa yisikhathi, kodwa, umzekelo, kwimeko ye-acne, isebenza ngempumelelo, kuba iyanqoba iindawo ezichithwayo.
Enye indlela yokwenza i-cryomassage kunye ne-cryoprocedures - unyango olubandayo - luyinto entsha - i-nitrojeni yamanzi ichithelwa kwi-cryopreservant ngobukhulu bemizuzu engama-2 ukuya kwe-3 ukuya kwi-1 dm2. isikhumba. Ubushushu be-cryogen buya kutsho kwi-degrees engama-180, kodwa inkosi inokunyusa ukuba ikhuphe ukuya kuma-50 ukuya kuma-80 ukuqwalasela iimpawu zesikhumba somthengi - ubukhulu, umbala, isantya sokubilisa, ubudala, njalonjalo.
Kukho okugqithiseleyo , kwaye mhlawumbi indlela ekhoyo namhlanje yokuvuselela "ice" kunye nonyango - i-cryo-electrophoresis. Ngokuxhomekeke kwingxaki ethile yesikhumba, amayeza akhethwe aphethwe kwaye ajojowe kwiindawo ezixubile zolusu ngoncedo lwangoku. Isilwanyana singene ngaphakathi kweseli kwaye, ngenxa yamashishini aphantsi aphantsi, senza ngokuthe ngcembe - kwiiyure eziyi-8-10, ezenza ngokugqithiseleyo umphumo walo.
Ngoncedo lweeseshoni eziliqela ze-cryoelectrophoresis, ukuba kungekhona ngonaphakade, emva kwexesha elide (iziphumo ezivela kwi-cryoprocedures ezidlulileyo ukusuka kwiinyanga ezintandathu ukuya kwiminyaka emibini) ukuba zitsho iingubo ezintle ebusweni, kwiinkophe, entanyeni, kwindawo ye-decollete. Lahla i-flabbiness yezandla, amathanga, ubuyisele i-elasticity yesifuba. Ngaphezu koko, liyimpumelelo kakhulu yokulwa ne-cellulite kunye ne-mafutha.
Ngendlela "i-orange peel" kunye nobunzima obukhulu kunokupheliswa ngokukhawuleza ngoncedo lwonyango kwi-cryo-sauna. Okokuqala, yithuba elihle kakhulu lokuhlanganisa umphumo we-cryomassage kunye / okanye i-cryoelectrophoresis. Okwesibini, i-sauna ephakamileyo yeqabunga ilungile. Inkqubo iqhubeka imizuzu emithathu, iqondo lokushisa lidlula i-degrees 120-160. Nangona kunjalo, ungavumeli lo mfanekiso ukwesabise wena - awuyi kuziva ukhululekile. Ngokuchaseneyo, uya kubuya "kwiNtshonalanga yePole" ngobomi obonwabileyo. Le ngenye yeepropati ezizodwa zezifudumala ezisezantsi. Bangela uxinzelelo lwexesha elifutshane emzimbeni womntu, kwinqanaba lazo zonke iinkqubo, ngokuqala ngeeseli. Umzimba uvelisa ngokugqithiseleyo i-endorphins, i-hormones yovuyo. Inkqubo ikwandisa i-immunity, ikhupha isifo esingapheliyo isifo sokugula, ibeka ngokuqhelekileyo umsebenzi we-endocrine, zesondo kunye neentloni.
Uncedo ngokukhethekileyo yi- cryosauna kulabo abafuna ukunciphisa umzimba. Ngenxa yoshishino lokutshintshisa ukushisa kwiseseshoni yomzuzu emithathu, ukuya ku-2000 kcal ilahleka kwi-cryocamera! Ngaphezu kwe-70% yabathengi abalahlekelwa isisindo kwiiseshoni ezininzi ngaphandle kokutya. Enye inzuzo - kwi-cryosauna, kuphela abantu abanesisindo esingaphezu kwesisindo, abo banesifo sokungabi naso, ngokuchaseneyo - fumana iikhilogram ezingekhoyo. Kubaluleke kakhulu ukuba ibanda lilawulwe ngabaqeqeshi. Ukongezelela, kuyimfuneko ukuqwalasela ingqinisiso. I-Cryomassage ayikwazi ukuyenza nge-couperose, i-cryosauna-ngezifo ezikhuselweyo, isifo sofuba, isifo somnyuba ophezulu kwi-2 - 3 isigaba, i-postinfarction kunye ne-post-stroke.
Ulwaphulo lwe-Ice lungenziwa ngaphandle kokushiya ekhaya.
I-anti-cellulite ice massage ivuselela kwaye isebenzise ukujikeleza kwegazi lwe-adipose tissue and muscle, isebenze umsele wamanzi, iqinisa iindonga zemithambo yegazi, inceda ekupheliseni i-edema kunye ne-stagnation.
Ukulungisa icebo elimhlophe akulona nzima. Uya kufuna iimfumba zokungqanda, ukusela okanye ukungabikho kwe-carbonated water mineral, kwaye, ukuba kuyimfuneko, iitrob, amajikijolo okanye iziqhamo. Amanzi aphethwe nje kwiibumba kwaye afakwe kwifrijini iminyaka engama-30 ukuya kwangama-60. Iitrobhu okanye iqoqo zabo zithanjiswa ngamanzi abilayo, sinyanzelisa imizuzu engama-40, size sitshise. Iintyatyambo kunye namajikijolo adluliselwa kwi-grinder yenyama kwaye songeza i-oyile yeoli yomnqumo. Ijusi yeelitrus sinciphisa amanzi amaminerali kwinxalenye 1: 2, ngoko siyityhala kwiibumba kwaye siyithumele kwifriji.
Okulandelayo - sinquma ukuba yiyiphi ingxaki esiyifuna ukuyicombulula ngoncedo lweekhabhi ezinqabileyo kunye ne-cryomassage kunye ne-cryoprocedures - unyango olubandayo.
Ukulwa ne-cellulite, iqhwa kumanzi acacileyo okanye kwi-juice ye-citrus iya kwenza.
Ukunciphisa imibimbi kuya kunceda i-ice kwiintyatyambo kunye namaqabunga amancinane ama-dandelions, kunye ne-mint kunye ne-strawberry.
Ukususela kusasa kwaye kungengxowa nje ngaphantsi kwamehlo ahlangule ubisi oluqingqiweyo.
Ukunyamekela kunye unyango lwe-valerian yolusu eqhelekileyo, i-plantain, i-yarrow, i-violet kunye ne-pharmacy fennel ifanelekile.
Isikhumba seengxaki nge-acne siphathwa ngeqhwa kwi-infinton of mint, i-St. John's wort, i-strawberries ezithambileyo, i-strawberries, i-peaches, i-watermelon, i-melon kunye ne-ice cubes ukusuka ekungeneni kwe-calendula kungekhona nje yome kwaye ivuselele isikhumba, kodwa ibuye ibe nefuthe elichasayo.
Ikhumba elomileyo liya kuvuselela iqhwa kwi-hawthorn ebomvu yegazi, i-Eleutherococcus spiny, ingcambu yedandelion. Kwaye kwakhona - ukusuka kwiziqhamo ze-ash ash okanye nayiphi na amajikijolo abomvu.
Ikhumba kunye ne-pigmentation kunye ne-freckles ezingapheliyo zifanelekile umhluzi oshushu ovela kwiingcambu ze-parsley kunye nesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi.
Ngaphambi kokuqhubela ngqo kwi-massage, kuyimfuneko ukujonga ukuphendula komzimba kubanda. Kule nto, iinqaba zeqhwa zifakwa kwi-forearm embalwa imizuzwana. Ukuba akukho nto ibonakaliswe ngokubomvu, uya kuhlalisa. Kodwa ungagqithisi - ukudibanisa nolusu kwindawo ethile akufanele kudlule imizuzwana emihlanu.
Ukuhlawula nge-cellulite. Iingcezu zeqhwa 4x2x2 cm kwisalathisi sesayizi ngokuthe ngenye indlela - i-rectilinear, i-circular kunye ne-zigzag ntshukumo kunye nemimandla yengxaki. Ummandla ngamnye utyunjwa ukususela kwimitha emi-2 ukuya kwemi-5 (asisayi!). Iqhwa ilungele kangcono kwi-napkin, ngaphandle kwemisebenzi yomsebenzi, kunjalo. Ekupheleni kwenkqubo, kuya kuba kuhle ukusebenzisa i-cream eluhlaza okanye i-gel kwiindawo ezixutywayo-i-lymph drainage ebalulekileyo kunye ne-gymnastics efanelekileyo kwimpahla iya kufumaneka.
Ukuhlamba ubuso kunye nentamo. Iindawo ezinokuthobeka kunye neentlanzi ezincinci apho kuvela khona iminyango emihle-ebunzini, ehlathini, enkundleni, eentlanzi zesikhumba ekhangele amehlo kunye nomlomo.
Ulwazi malunga nezifo ze-anorexia kunye ne-bulimia
Impilo yabantu, nendlela yokuyigcina
Indlela yokunciphisa isondlo ngoncedo lwezonyango zabantu?
Izindlela zeNdabuko zokuphatha izibilini
Iimpahla zeBheta Butter kunye nendlela yokukhetha
Indlela yokusebenzisa i-iodine grid ngokuchanekileyo
Yintoni enokuyenza xa unentlungu yokuguquka
I-tomato-strawberry gazpberry (isobho esibandayo)
Izifo zomqala kunye nomlenze kumntwana
I-Horoscope kwiNkwenkwekazikazi ngo-Oktobha 2016
Ukupheka kwezitya eziyiluncedo entliziyweni
Indlela yokufunda ukulawula iimvakalelo zakho, iingqondo
Ubuhlobo bomntu omdala, intombi endala kunye nonina
Ukuvavanya uthando lokwenene?
Usana luvakalelwa kakhulu kwaye luvamise ukumamatheka
Unokunyamekela njani izilwanyana zamadoda ezinwele?
Yintoni ebonakalayo intlanzi yamanzi?
Iklabishi ye-klabishi ukusuka kwimvubelo, i-custard beat
Yintoni enokuyibona ngoFebruwari 14: iifilimu ezintsha zothando zothando
Iingcinga ngeengozi zokutshaya
I-Cocktail "Yimangalisa" kunye nobusi nekiwi
Yoga, ukuphefumla umzimba wokulahleka kwesisindo
Umtshato kwisitayela seProvence